FirstCoin စျေး - အွန်လိုင်း FIRST ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို FirstCoin (FIRST)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ FirstCoin (FIRST) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ FirstCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
FIRST – FirstCoin
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ FirstCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
FirstCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
FirstCoinFIRST သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0361FirstCoinFIRST သို့ ယူရိုEUR€0.0306FirstCoinFIRST သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0276FirstCoinFIRST သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0329FirstCoinFIRST သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.327FirstCoinFIRST သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.228FirstCoinFIRST သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.806FirstCoinFIRST သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.135FirstCoinFIRST သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0483FirstCoinFIRST သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0505FirstCoinFIRST သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.808FirstCoinFIRST သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.28FirstCoinFIRST သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.196FirstCoinFIRST သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹2.71FirstCoinFIRST သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.6.06FirstCoinFIRST သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0495FirstCoinFIRST သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0547FirstCoinFIRST သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿1.13FirstCoinFIRST သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.251FirstCoinFIRST သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥3.82FirstCoinFIRST သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩42.91FirstCoinFIRST သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦13.67FirstCoinFIRST သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽2.66FirstCoinFIRST သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.998
FirstCoinFIRST သို့ BitcoinBTC0.000003 FirstCoinFIRST သို့ EthereumETH0.0001 FirstCoinFIRST သို့ LitecoinLTC0.000635 FirstCoinFIRST သို့ DigitalCashDASH0.00038 FirstCoinFIRST သို့ MoneroXMR0.000392 FirstCoinFIRST သို့ NxtNXT2.66 FirstCoinFIRST သို့ Ethereum ClassicETC0.00525 FirstCoinFIRST သို့ DogecoinDOGE10.47 FirstCoinFIRST သို့ ZCashZEC0.000398 FirstCoinFIRST သို့ BitsharesBTS1.43 FirstCoinFIRST သို့ DigiByteDGB1.38 FirstCoinFIRST သို့ RippleXRP0.125 FirstCoinFIRST သို့ BitcoinDarkBTCD0.00125 FirstCoinFIRST သို့ PeerCoinPPC0.125 FirstCoinFIRST သို့ CraigsCoinCRAIG16.52 FirstCoinFIRST သို့ BitstakeXBS1.55 FirstCoinFIRST သို့ PayCoinXPY0.633 FirstCoinFIRST သို့ ProsperCoinPRC4.55 FirstCoinFIRST သို့ YbCoinYBC0.00002 FirstCoinFIRST သို့ DarkKushDANK11.63 FirstCoinFIRST သို့ GiveCoinGIVE78.48 FirstCoinFIRST သို့ KoboCoinKOBO8.49 FirstCoinFIRST သို့ DarkTokenDT0.0332 FirstCoinFIRST သို့ CETUS CoinCETI104.63
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 07 Aug 2020 19:00:02 +0000.